भर्खरै प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणा, सबैको ध्यान ओलीतिर, नयाँ अठोटका साथ देश अघि बढ्यो बढ्यो PM Oli. -
Home News भर्खरै प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणा, सबैको ध्यान ओलीतिर, नयाँ अठोटका साथ देश अघि...
भर्खरै प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणा, सबैको ध्यान ओलीतिर, नयाँ अठोटका साथ देश अघि बढ्यो बढ्यो PM Oli.
राजनीतिज्ञहरूको चर्तिकला देखेर जोकसैले पनि तीप्रति विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। सर्वविदित तथ्य हो, राजनीति भनेको नीतिहरूको माउ हो, यो सबैभन्दा महŒव र मूल्यवान् नीति हो। सबैले मानेका छन्, राजनीतिप्रतिको भरोसामा समाज अडिएको हुन्छ।
जब राजनीति चलाउने राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो मार्ग छाड्छन्, अझ स्पष्ट भनूँ– जब ती पथभ्रष्ट हुन्छन् तब समाजको विश्वास टुट्न थाल्छ र भरोसाको पर्खाल ढल्न पुग्छ। जहाँ विश्वास हुँदैन, जहाँ भरोसा हुँदैन त्यहाँ सही केही पनि हुँदैन। सही मार्गमा नचलेको समाजले भरिएको समाज कदापि प्रगतिपथमा लम्कन सक्दैन।
राजनीति गर्नुको नाममा जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक परिभाषा वर्तमान समयमा स्थापना गर्न खोजेको भान हुन्छ, आजको राजनीतिक क्षेत्रमा। त्यसैले यहाँ यो प्रश्न जायज छ, राजनीति गर्नुको लक्ष भनेको सत्ता प्राप्ति हो ? एक व्यक्तिले राज गरिरहेको सत्ता उसैले बचाएर राख्न खोज्नु वा अर्को व्यक्तिले त्यो सत्ता हत्याउनु खोज्नु नै राजनीति गरिनु हो ? अहिले नेकपा–झगडामा चलिरहेको आन्दोलन (?) हेर्दा त्यो सत्तासंघर्षसिवाय अन्यत्र परिलक्षित देखिँदैन।
गणतन्त्रलाई मनैदेखि मानीनमानी स्वीकार गरिसकेको राप्रपाले फेरि राजतन्त्रको आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। यसको भित्री पाटो केलाउने हो भने नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको लडाइँमा उसले उठाउन खोजेको फाइदाका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। के राजनीतिज्ञको चरित्रमा अडान भन्ने शब्द हुँदैन ? अर्कोतर्फ, एउटै कांग्रेस पार्टीको, सत्तामा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा हुँदा होस् एउटै मतको धारणा आएको पाइन्न। यतिसम्म कि स्वयं सभापति र उपसभापतिको धारणामा कुनै मेल खाएको देखिन्न।
एक पक्ष संसद् पुनस्र्थापनाका पक्षमा जस्तो देखिन्छ भने अर्को पक्ष विघटनको समर्थन गरेर निर्वाचनको पक्षमा रहेको जस्तो देखिन्छ। प्रश्न उठाइयो भने सहज जवाफ आउँछ, बहस–विवाद भएन भने पार्टी निर्जीवप्रायः हुन्छ। प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र यस्तो परिपाटी हुन जरुरी हुन्छ, लोकतन्त्रको विशेषता हो यो। तर पनि प्रश्न जीवित रहन्छ
Previous articleसपानालाई पनि नछोड्ने भन्दै हालियो मु*द्धा, बाबुछोरीले देशकै बेइ*ज्जत गरे ! प्रह*रीको खोजीमा
Next articleबाहु*लाउदै गरेको मान्छे बन झा*क्रीले फुक्ने बित्तिकै मिनेटमै निको भएपछि हेर्नुस् चम*त्कार